MARIAZIN’I D-LAIN : Tsy mitsahatra ny ady hevitra mafana amin’ny tambajotra sosialy
Manompa, manozona, mihantsy ady…. Nefa misy ihany koa ny mandamina, miezaka mahazo sy tsy mitsara ny safidin’i D-Lain. 8 novembre 2017
Anisan’ireo mpanakanto tanora nitondra ambony ny voninahitr’i Madagasikara teo amin’ny sehatry ny hira i D-Lain.
Tovolahy izy io, ary fantatra tamin’ny faran’ny herinandro teo fa nanambady lehilahy teratany vahiny. Tsy vao izao no nisy lehilahy miaraka amin’ny lehilahy na vehivavy miaraka amin’ny vehivavy eto Madagasikara. Efa maro ny nahita an’i Zatia Rocher izay lehilahy nivadika vehivavy mihitsy. Betsaka ihany koa ny sarim-bavy na lehilahy manambady lehilahy sy vehivavy manambady vehivavy eny amin’ny fiarahamonina.
Fa mbola tsy nisy kosa fipoahana fankahalana sy fanenjehana tahaka izao. Mety antony maro no mahatonga izany, eo aloha ny lazain’ny sasany maha-kristianina azy, ny lazaina fa lalànan’ny natiora, nefa eo koa ny maha olo-malaza azy ka atahoran’ny sasany horaisin’ny ankizy ho ohatra. Na izany aza dia manana fahalalahana hanao ny fiainany sy ny safidiny ny olona iray rehefa tsy manitsakitsaka ny zo sy ny fahafahan’ny hafa.
Zo fototra omen’ny lalàmpanorenana sy ny zon’olombelona azy izany. Tsiahivina fa taona vitsivitsy teto Mahajanga dia nisy nahavita namono nahafaty sarim-bavy iray taorian’ny fifamaliana. Matetika mantsy dia hadrohadroin’ny olona eny amin’ny fiarahamonina izy ireo ka misy tsy mahazaka ary miafara amin’ny fifamaliana. Tamin’izay anefa dia niafara tamin’ny fandatsahana aina izay tena fandikana ny didin’Andriamanitra no tsy ao anatin’ny lal0nan’ny natiora ary vao mainka ohatra ratsy ho an’ny tanora. Ny fahaizana miara-monina sy miara-miaina na tsy mitovy aza no zava-dehibe indrindra miaraka amin’ny fifanajana ho an’ny fiarahamonina mirindra.
Ny sisa anjaran’ny ray aman-dreny ny manabe ny zanany amin’ny hevitra sy foto-kevitra ijoroany.
2017-11-13 18:09:43 par jf
Mbola azo lazaina ho fahavetavetana izany eto Madagasikara satria tsy misy lalana manome alalana olona mitovy entana hifanambady eto Madagasikara. Raha ny amiko dia tokony ho foanana izany mariage izany raha natao tany Mada.